Dowladda Soomaaliya oo diyaarad Gurmad sida u dirtay Gedo | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Dowladda Soomaaliya oo diyaarad Gurmad sida u dirtay Gedo
Dowladda Soomaaliya oo diyaarad Gurmad sida u dirtay Gedo
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa manta oo talaado ah magaalada Baardheere ee gobolka Gedo waxay gaarsiiyay Diyaaraddii ugu horeysay oo siday Gargaar loogu talagalay dadkii ay Fatahaada sameeyeen.
Diyaaradan ayaa siday gargaar iskuugu jiro Daawooyin , Maro kaneecooyin , Teendhooyin, bustoyaal iyo agabyo kala duwan oo ay dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ugu talagashay gargaarka dadka ay fatahaadu Saameeysay.
Agabyadaan ayaa la sheegay in loogu tala galay dad ka barakacay fatahaad Wabiga Shabeelle laga sameeyay deegaano ka tirsan Goboladda Jubboyinka iyo Gedo ee Maamulka Jubbaland ee Koofurta Soomaaliya.
Sidoo kale waxaa Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada hoose ka socda olole ay sameeynayaan Maamulka,Ganacsatada iyo Shacabka Magaalada oo lugu gurmanayo dadka ay saameeyeen Fatahaada wabiga Jubba ee mara deegaanada Maamulka Jubbaland.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dadaal ugu jirto sidii loogu gurman lahaa dadka Soomaaliyeed oo ay waxyeeladu ay ka soo gaartay fatahaadaha roobabka ka da’ay degaanno kala duwan oo ku yaalla koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.